ချစ်သူ ဆွေဇင်ထက်ရဲ့ မွေးနေ့မှာ မမေ့နိုင်စရာအမှတ်တရတွေကို ဖန်တီးပေးနိုင်လို့ ထပ်တူဝမ်းသာနေတဲ့ ဂေဂေး - Maythadin
ချစ်သူ ဆွေဇင်ထက်ရဲ့ မွေးနေ့မှာ မမေ့နိုင်စရာအမှတ်တရတွေကို ဖန်တီးပေးနိုင်လို့ ထပ်တူဝမ်းသာနေတဲ့ ဂေဂေး
May Thadin | November 18, 2020 | Celebrity | No Comments
အဆိုတော် ဂေဂေးနဲ့ အလှမယ် ဆွေဇင်ထက်တို့ ချစ်သူနှစ်ယောက်ကတော့ ???? စုံတွဲလေးအဖြစ် ပရိသတ်တွေကြားထဲမှာ ထင်ရှားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂေဂေးနဲ့ ဆွေဇင်ထက်တို့က သူတို့ရဲ့ အချစ်ရေးလေးကို သိုသိပ်စွာလျှို့ဝှက်ထားခဲ့ပေမယ့် ???? ???????? ??????? ???? ပြိုင်ပွဲမှာတော့ ဆွေဇင်ထက်က သူမတို့ရဲ့
အချစ်ရေးကို လူသိရှင်ကြား ဖွင့်ပြောခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကလည်း -ိင်ခွဲခြားမှုတွေမရှိပဲ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ချစ်ခြင်းမေတ္တာတစ်ခုတည်းနဲ့ တည်ဆောက်ထားကြတဲ့ ဂေဂေးနဲ့ ဆွေဇင်ထက်တို့ ချစ်သူနှစ်ယောက်ကို ချစ်ခင်အားပေးကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလ (၁၅) ရက်နေ့ကတော့
ဆွေဇင်ထက်ရဲ့ မွေးနေ့လေးပဲဖြစ်ပြီး ဂေဂေးကလည်း သူမရဲ့ချစ်သူလေးအတွက် ပျော်စရာ အမှတ်တရတွေအများကြီးကို ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ ဂေဂေးက “????? ???????? ပါ ချစ်သူလေးရေ ??? ??????? မနေ့ကရော ဒီနေ့လေးရော မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်အောင် လုပ်ပေးခွင့်ရလို့ အရမ်းကို
ပျော်ပါတယ်။ အရမ်းလဲ ချစ်ပါတယ်နော်။ မွေးနေ့မှစပြီး နောက်ထပ်နေ့ရက်တွေတိုင်း အောင်မြင်ကျော်ကြားလူကြိုက်များတဲ့ အနုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်” ဆိုပြီး ချစ်သူ ဆွေဇင်ထက်အတွက် မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဆွေဇင်ထက်ကတော့ ချစ်သူလေးရဲ့
ဂရုစိုက် မှုကြောင့် မမေ့နိုင်စရာကောင်းတဲ့ မွေးနေ့လေးကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂေဂေးနဲ့ ဆွေဇင်ထက်တို့ ချစ်သူနှစ်ယောက် အခုလိုပဲ ထာဝရပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ယူနီကုဒျ ဖွငျ့ ဖတျရနျ
အဆိုတျော ဂဂေေးနဲ့ အလှမယျ ဆှဇေငျထကျတို့ ခဈြသူနှဈယောကျကတော့ ???? စုံတှဲလေးအဖွဈ ပရိသတျတှကွေားထဲမှာ ထငျရှားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဂဂေေးနဲ့ ဆှဇေငျထကျတို့က သူတို့ရဲ့ အခဈြရေးလေးကို သိုသိပျစှာလြှို့ဝှကျထားခဲ့ပမေယျ့ ???? ???????? ??????? ???? ပွိုငျပှဲမှာတော့ ဆှဇေငျထကျက သူမတို့ရဲ့
အခဈြရေးကို လူသိရှငျကွား ဖှငျ့ပွောခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျတှကေလညျး -ိငျခှဲခွားမှုတှမေရှိပဲ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ခဈြခွငျးမတ်ေတာတဈခုတညျးနဲ့ တညျဆောကျထားကွတဲ့ ဂဂေေးနဲ့ ဆှဇေငျထကျတို့ ခဈြသူနှဈယောကျကို ခဈြခငျအားပေးကွတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ပွီးခဲ့တဲ့ နိုဝငျဘာလ (၁၅) ရကျနကေ့တော့
ဆှဇေငျထကျရဲ့ မှေးနလေ့ေးပဲဖွဈပွီး ဂဂေေးကလညျး သူမရဲ့ခဈြသူလေးအတှကျ ပြျောစရာ အမှတျတရတှအေမြားကွီးကို ဖနျတီးပေးနိုငျခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီတဈခါမှာတော့ ဂဂေေးက “????? ???????? ပါ ခဈြသူလေးရေ ??? ??????? မနကေ့ရော ဒီနလေ့ေးရော မှေးနမှေ့ာ ပြျောရှငျအောငျ လုပျပေးခှငျ့ရလို့ အရမျးကို
ပြျောပါတယျ။ အရမျးလဲ ခဈြပါတယျနျော။ မှေးနမှေ့စပွီး နောကျထပျနရေ့ကျတှတေိုငျး အောငျမွငျကြျောကွားလူကွိုကျမြားတဲ့ အနုပညာရှငျတယောကျဖွဈပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ” ဆိုပွီး ခဈြသူ ဆှဇေငျထကျအတှကျ မှေးနဆေု့မှနျကောငျးတောငျးပေးထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ဆှဇေငျထကျကတော့ ခဈြသူလေးရဲ့
ဂရုစိုကျ မှုကွောငျ့ မမနေို့ငျစရာကောငျးတဲ့ မှေးနလေ့ေးကို ပိုငျဆိုငျခဲ့ရပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဂဂေေးနဲ့ ဆှဇေငျထကျတို့ ခဈြသူနှဈယောကျ အခုလိုပဲ ထာဝရပြျောရှငျခမျြးမွနေို့ငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။
ကြည့်မိသူတိုင်းကို ရင်သပ်​ရှုမောဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်အထိကို စွဲဆောင်မှုရှိလှ​သော မိုးယုစံရဲ့ ပန်းချီကားချပ်လေးများ
ယခုလက်​ရှိကျင်းပ ယှဉ်​ပြိုင်​​နေ​သော THE VOICE MYANMAR ပြိုင်ပွဲကြီးဟာ လုပ်ဇာတ်လားလို့ ဒဲ့ဝေဖန်လာခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်တစ်​ဦးဖြစ်​​သော ထောင်ဇာနှမ်းဆုန်
သွားချင်တာမသွားရ စားချင်တာမစားရနဲ့မို့ ကိုဗစ်ကာလကြီးမှာ စိတ်ဓာတ်တွေကျနေတယ်လို့ ရင်​ဖွင့်​ကာ​ပြောပြလာတဲ့ ဖိုက်တင်မင်းသားကြီး စိုင်းသီဟရဲ့ (ရုပ်​သံ)
တျောလှနျရေးမှာကဆြုံးသှားတဲ့ ခဈြသူကောငျလေး ကစားနကြေ ဂိုးတိုငျအောကျမှာထိုငျပွီး အမှတျတရတှကေိုကွညျ့ကာ လှမျးဆှတျသတိရနရေတဲ့ ကောငျမလေး
ပွညျသူအားလုံး ခကျခဲပွီးစိတျသောကရောကျနကွေခြိနျ အသကျကွီးကွီး လငျမယား ၂ ယောကျကို မတနျတဆဈေး တောငျးလိုကျတဲ့ YBS ၆၅
ပွနျမွငျရဖို့အခှငျ့အရေးနညျးတဲ့ ကနျြမကျြလုံးတဈဖကျ ကို အမအေ့တှကျ အမွနျဆုံးပွနျမွငျခငျြတယျလို့ ရငျဖှငျ့ လာတဲ့ ကိုမငျးသူရ
ဘုရားရှိခိုးတိုငျး မွနျမာပွညျ ကွီး ငွိမျးခမျြးဖို့ အမွဲဆုတောငျးပေးနတေဲ့ ပိုငျတံခှနျ
ရဲတိုကျ အဖမျးခံရမှုအတှကျ အမှနျတရားပျေါပေါကျဖို့ မငျးမျောကှနျး တောငျးဆို
လူနအေိမျတှနေားမှာ Defense လုပျမိလို့ မောငျးထုတျခံရတာကွောငျ့ ခှငျ့လှတျပေးဖို့ ထိုငျကနျတော့ပွီး ဒူးထောကျတောငျးပနျခဲ့ကွတဲ့ GZ လူငယျတဈစု